SomaliTalk.com » Waa maxay shuruudaha iyo sifooyinka laga rabo Madaxweynaha Cusub?
Qore: Farah Aw-Osman
Ummad kastaa waxay leedahay sifooyin iyo shuruudo ay lagama maarmaan tahay in uu buuxsho qofka hogaanka u qabanaya ama u qalma inay ku aaminaan masiirka ummadooda.
Hadaba waxaa maanta jagada madaxweynenimo ee Soomaaliya u taagan musharixiin ku dhow ilaa 40, kuwaas oo midkasta oo ka mid ahi uu aaminsan yahay inuu yahay qof leh xirfadaha, sifooyinka iyo aqoonta hogaamiye, sidaa awgeedna uu u qalmo inaan ku aamini karno masiirka ummada Soomaaliyeed.
Jagada Madaxwenenimo maaha mid fudud, balse waa shaqo adag maadaama uu madaxweynuhu yahay taliyaha guud ee ciidamada, gudoonka habsami u socodka laamaha dowlada, magacaabaha Xaakimada iyo Xeerbeegta Sharciga, Saxiixaha Shuruucda cusub ee dalka, Magacaabaha Safiirada, Soo dhaweeyaha Martida, u matalaha ummada Soomaaliyeed ee Shirarka Caalamiga ah iyo ka qaybgalaha munaasabad sharafeedyada. Dhamaan howlahaas kor ku xusani waa kuwo u baahan aqoon garaad xambaarsan, xirfad xeel dheeri huwan, dulqaad diin lagu dheehay, dad isku wad sinaan iyo cadaalada lagu qurxiyay, iyo dareen wadaniyadeed oo dad iyo dal jacayl wata.
Hawsha madaxweynuhu maaha mid qofkasta lagu aamini karo, waa mid u baahan in loo dejiyo shuruudo iyo sifooyin aasaasi ah oo qofkii aan soo buuxin sifooyinkaas looba ogolaan inuu ka mid noqdo kooxda isugu soo haraysa tartanka.
Sifooyinkaan iyo shuruudahaan hoos ku taxani waa kuwo lagu kala reebi karo musharaxiinta, waa kuwo ay isticmaali karaan taageerayaashu kuna miisaami karaan musharaxiiinta si markaasi qofka taageeradaada aad siinayso uu u noqdo mid wakhtigaaga, maalkaaga iyo sumcadaada aad u huri karto. Sidoo kale waxaa lama huraan ah in xubnaha baarlamaanka cusub ee dooranaya Madaxweynaha mustaqbalka ay haystaan mid qiyaas iyo miisaan ay ku kala saari karaan tartamayaasha, ee aysan yaa ila jifo ah wax ku dooran ee ay wax ku doortaan yaa masiirka ummada lagu aamini karaa.
Sidaa awgeed , waa lama huraan inay jirto sifooyin iyo shuruudo ay lama hurana tahay in laga helo qofka la dooranayo.
Nafiihurenimo: inuu yahay qof aan maal, mansab iyo magac soo doonan, balse diyaar u ah inuu naftiisa, sharaftiisa, maalkiisa, iyo magaciisaba u huro adeega ummadiisa, diyaarna u ah inuu ku dhiman karo isagoo fulinaya howshaas iyada ah sidii ay qaar badan oo Muwaadiniin Soomaliyeed ahba ugu nafwaayeen doonista qaranimada , dib u soo celinta haykalka dowli iyo dib u hanashada amniga iyo istiqraadka Soomaaliyeed.
Hadaba hadii aad sifooyinkan iyo shuruudahan ku qiyaasto ama ku miisaanto musharaxiinta maanta u tartamaya jagadda madaxweynenimo waxaad arkaysaa in qaar badan aysan gudbi doonin imtixaanka wajigiisa koobaad, meesha qaar kalena ay buuxin karaan qaar ka mid ah shuruudaha balse aysan wada buuxin karin dhamaan. Sidaa awgeed, hadafkayga ama ulajeedadii aan ka lahaa qormadani maahayn inaan hebel iyo hebel kala fadilo, balse waxay ahayd inaan iftiinsho sifooyinka iyo shuruudaha aasaasiga u ah in qof uu isku soo sharaxo ama hanto jagadda Madaxweynenimada iyo hogaanka masiirka ummada Soomaaliyeed.